Nazi iiPodcasts zethu zoLuntu eziThengiswayo | Martech Zone
Ukuba awuzange umamele iipodcast, ndingakukhuthaza ukuba. Khuphela Stitcher okanye usebenzise ifowuni yakho okanye usebenzise iqonga ledesktop yakho yepodcasting. iTunes or Google Play iya kukuvumela ukuba ukhangele kwaye ubhalise kubo.
Izolo ebusuku, besincokole kamnandi nenkokheli yalapha ekhaya ebiqeqeshela umdyarho wokuqala wemini- ngeminyaka engama-58. Uthe, kuqeqesho, enye yezona zinto zibalaseleyo awakhe wazenza yayikukungena kwiipodcast. Wazama umculo, kodwa ayikhange ifumane ukugxila kunye nengqwalaselo yakhe ekusebenzeni njengepodcasting. Unokuphulukana nokucinga malunga nexesha le-podcast, evumela ukuba abalekele kude kwaye aphumle ngakumbi.
Kwiveki ephelileyo, siye senza udliwanondlebe UChris Spangle -Udliwanondlebe esiza kulupapasha kungekudala. UChris ngomnye wabakhokeli beepodcasters abaqhuba enye yezona zikhulu zepodcast kwezopolitiko kwilizwe. Ukwangumphathi wedijithali yenye yeenkqubo zikanomathotholo zesizwe ezikhulu kangangeminyaka eliqela. UChris uyazi iaudiyo, kwaye uyayiqonda Umlingo ye-podcasting njengaye akukho mntu ndakhe ndadibana naye.
Ngelixa uninzi lwabantu lucinga ukuba kukho ulawulo oluphezulu kumajelo eendaba - kwisicatshulwa, kwisandi, kwividiyo -Iyinto ayifani kwaphela kwaphela. Ngokumamela kuphela nokuva incoko, abaphulaphuli be-podcast bayakwazi ukugxila kwincoko engcono kakhulu kunayo nayiphi na enye into ephakathi. Inamandla kakhulu kubuchule bayo bokubamba ingqalelo kwaye akufuneki ijongelwe phantsi amashishini.
Siyakholelwa kwipodcasting kakhulu kangangokuba sizakhele ezethu I-state-of-art art podcast studio edolophini e-Indianapolis. Ukuze uqalise, sibuze yethu Martech Zone uluntu zeziphi iipodcast zabo abazithandayo zokuba uqalise. Okanye ukuba sele umamele, ukufumana ezinye ezintsha!
Itrafikhi engapheliyo -Iintengiso zikaFacebook kunye neengcali zemithombo yeendaba ezihlawulelweyo uKeith Krance, uRalph Burns (Dominate Web Media), kunye noMolly Pittman (DigitalMarketer) babelana ngentengiso ye-Facebook, iiNtengiso ze-YouTube, iAdwords zikaGoogle, i-Twitter kunye ne-Instagram iingcebiso zentengiso, amacebo kunye nezifundo zendlela yokukhula ishishini lakho okanye uphawu ngentengiso ekwi-Intanethi.
IiTshizi ezingakumbi, iindevu ezingaphantsi -Mamela kwiveki nganye xa uDean Jackson enceda abanini bamashishini kunye noosomashishini njengawe xa usenza i-8-Profit Activators kumashishini abo. Iphepha eliphuzi roulette kwi-steroids!
Ukugcina kunye nokuhamba -Ibonisa amabali eendaba aphambili kunye neziganeko kwisithuba, kunye nodliwanondlebe neengcali eziphezulu, iingcali zobuchule kunye nabaphembeleli abancedisayo ekubumbeni umbono wentengiso kunye nentengiso yetekhnoloji yokuthengisa ngomso.
IPodcast yeBrainfluence -U-Roger Dooley wabelana ngeendlela ezijolise kwingqondo, kunye nobuchwephesha beendwendwe zakhe, ukonyusa ukucenga ngekhonkrithi, neengcebiso ezisekwe kuphando.
Flip Utshintsho -Ipodcast yeveki nganye eziswe kuwe liqela le-Uberflip, Flip the switch ineengxoxo ezikhanyisayo kunye neengqondo eziqaqambileyo zentengiso. Iziqendu ezitsha zikhutshwa rhoqo ngoLwesibini.
Umhlobo weNtengiso -Umlingane weNtengiso uhlala emnandi, uhlala enomdla, kwaye uhlala ejolise ekuboneni kunye nemibono eya kuthi inyuse ubukrelekrele bakho bokuthengisa buye ku "11."
VB Yenza -VB Zibandakanye, itekhnoloji ethembekileyo yokuthengisa itekhnoloji evela kwiVentureBeat eyabanjelwa ngokubambisana nguStewart Rogers kunye noTravis Wright.
Iinkonzo zentlalo -Mamela ukuqonda okwenyani ngabantu bokwenyani abenza umsebenzi wokwenyani kwimidiya yoluntu. Ufumana amabali angaphakathi kunye neemfihlo zasemva kwemiboniso malunga nokuba iinkampani ezinje ngeFord, iDell, IBM, ESPN kunye neninzi labasebenzi, zisebenza kwaye zilinganisa iinkqubo zazo zosasazo lwentlalo.
Intliziyo yokuthengisa -Fumana ulwazi lokuthengisa lokukhulisa ishishini lakho eliphakathi ngokwenza unxibelelwano lwentliziyo lokwenyani kunye nabathengi bakho.
Abasebenzi bezoQoqosho -I-Ecommerce Crew nguMike Jackness kunye noGrant Chen, abanini bevenkile abaneminyaka engamashumi amabini yamava adibeneyo kumashishini aphumeleleyo kwi-Intanethi.
I-eCommerceFuel Podcast -Kwi-eCommerceFuel podcast sigxile kwiingcebiso, amacebo kunye namabali ukunceda abanini bevenkile ezivenkileni bathathe ishishini labo bakwinqanaba elilandelayo.
Impembelelo ye-Ecommerce -Impembelelo ye-Ecommerce yipodcast yomnini-shishini we-ecommerce kunye nolawulo lwentengiso kwi-Intanethi. Sineengxoxo eziqinisekileyo kunye neenkosi zentengiso ye-ecommerce kunye nophawu, kwaye sinike uqeqesho kunye nezicwangciso zokukunceda ukuba uguqule ngakumbi iindwendwe zakho ziye kubathengi abahlawulayo.
Yakha Ivenkile yam ekwi-Intanethi -Ingcali yentengiso ye-eCommerce osele uthembele kuyo ukunceda ukusebenza kwishishini lakho.
I-MBA yetropiki -Bazinikezele kwintshukumo ekhulayo yendawo yoosomashishini abazimeleyo kwihlabathi liphela.
Le Ntengiso yakudala -Nangona uninzi lwabantu lucinga ukuba ukuthengisa umxholo kuyinto entsha kraca, ukuxelela amabali ukutsala nokugcina abathengi, yeyona nto indala kwezentengiso. Le ntengiso indala ingumbulelo wethu kuloo nto.
Incwadi yokuthengisa iPodcast Udliwanondlebe lweveki nababhali abathengisa kakhulu ukukunceda uqhubeke nento esebenza kwicandelo elitshintsha ngokukhawuleza lentengiso yale mihla (kunye nentengiso).
Abathengisi bePodcast -U-LinkedIn kaJason Miller uhlala phantsi nezinye zezona zibane ziqaqambileyo kwintengiso ukuze athethe ngeendlela zokuthengisa ze-B2B, ezona ndlela zibalaseleyo zokujonga, kwaye babone ukuba banamabali abonisa iintloni abazimiseleyo ukwabelana ngawo.
Ukuthengisa ngobuchule -Ipodcast yeveki nganye inodliwanondlebe olunzulu kunye nabathengisi abakhaliphileyo abavela kuzo zonke iindlela zobomi. Ukusingathwa yiPapashoProfs, le mizuzu ingama-30, i-podcast yeveki nganye ihambisa ukuqonda okwenzekayo kunye neengcebiso zokwenyani zokukunceda uthengise ngobuchule.
Imbotyi -Incoko eqinisekileyo yeveki nganye kwiindlela ezichaphazela uphawu lwakho. Uyamamela?
Izixhobo zedijithali -Izinto zeDigital Outliers zeBMC zibonisa incoko kunye neengqondo zethu eziqaqambileyo njengoko zijonga iindlela ezininzi zetekhnoloji yedijithali eguqula indawo yokusebenza yanamhlanje.
Idijithali yeNtengiso yeDijithali -UDavid Bain udliwanondlebe neengcali zentengiso ezikwi-intanethi kwisifundo sabo sobungcali- kunye nokufumana uluvo lwabo kwimeko yeshishini le-intanethi namhlanje.
Ukuthengisa ngaphezulu kweKofu -Ukuthengisa ngaphezulu kweKofu kunomsindo kwimfuno egubungela zombini kunye nentengiso entsha. Ababuki zindwendwe bakho, uJohn J. Wall kunye noChristopher S. Penn, barekhoda umboniso kwivenkile yekofu yalapha veki nganye kwaye upapashe umboniso ngoLwesine kusasa.
Isikolo seNtengiso -Isikolo seNtengiso sikulethela imizuzu eli-10 yeengcebiso zentengiso ezenziwayo yonke imihla.Fumana iingcebiso ezifanelekileyo zokuthatha ishishini lakho liye kwinqanaba elilandelayo.
Olu luhlu alukho kulandelelwano oluthile, endilithandayo kwaphela. Kukho ezinye ezithandwayo Iipodcast zentengiso kwaye endingazange ndive ukuba ndiza kujonga. Ngoluhlu olunjengolu, ndingakukhuthaza nje ukuba ulinge kwaye umamele isiqendu esinye okanye ezibini ukubona ukuba uyayithanda ipodcast kwaye ufuna ngaphezulu. Siyathemba ukuba uza kubhalisela okwethu Udliwanondlebe noMartech ipodcast!
Ndiqinisekile ukuba uya kufumana iigugu ezimbalwa oza kuthi uzilale ngokuzimeleyo!
tags: beancastukusebenza kwengqondoYakha ivenkile yam ekwi-intanethiunomathotholo wentengiso yedijithaliIzixhobo zedijithaliIqela le-ecomabasebenzi becommercezekisoFlip iswitshiincwadi yentengiso podcastiqabane lokuthengisaUkuthengisa ngaphezulu kwekofuIntengiso yePodcastisikolo sentengisongobuchule kwezentengisomartechiitshizi ezininzi iindevu ezingaphantsiUkuhamba rhoqoIipodcastsezentlaloephucukileyo kubathengisi podcastingqokelela kunye nokuhambaintliziyo yentengisole ntengiso yakudalatropical mbavb zibandakanye
Into eNtsha eNtsha (@TNNTnews)
Epreli 26, 2017 ngo-9: 19 AM
Zonke iipodcast ezinkulu !! Enkosi ngoluhlu!